पढ्न भनेर स्कूल गए, कक्षा कोठाभित्रै सबैका अगाडि यस्तो गरेपछि बिद्यालयले लियो एक्सन ( हेर्नुहोस् भाइरल भिडियो ) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारपढ्न भनेर स्कूल गए, कक्षा कोठाभित्रै सबैका अगाडि यस्तो गरेपछि बिद्यालयले लियो एक्सन ( हेर्नुहोस् भाइरल भिडियो )
April 26, 2021 admin समाचार 482
कक्षाकोठाभित्रको उक्त बिहेको भिडियो उनीहरुकै सहपाठी एक अर्की किशोरीले खिचेकी हुन् । घटना सार्वजनिक भएसँगै विद्यालय व्यवस्थापनले बिहे गर्ने ती किशोर–किशोरीलाई निष्कासन गरेको छ । उक्त घटनापछि किशोरीलाई उनीहरुका बुवा–आमाले घरमा छिर्न दिएनन् । जसका कारण उनलाई एक स्थानीय मनोपरामर्शदातृ संस्थामा लगियो । केटाका अभिभावकसँग पनि कुरा गरेर उसलाई मनोपरामर्श दिइयो । प्रहरीले उक्त घटनाका सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । प्रहरीले बिहे गरेको भनिएका किशोर–किशोरी तथा उनीहरुका अभिभावकका साथै विद्यालय प्रशासनको समेत बयान लिने छ । अनुसन्धानका क्रममा दोषी पाइएकाहरुलाई कारवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
November 30, 2020 admin समाचार 3118
भगवान, इश्वर, अल्लाह जे जे ले पुकारेपनि देवत्वमा विश्वास नगर्ने मानिस विश्वमा नै कम छन् । हुनपनि हो आखिर सृष्टिमा केही न केही तेस्रो शक्तिको देन छ । यही मन्दिरहरुमा अति विश्वास भएको ठुलो केदार
तपाईहरुको आगाडी आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ
November 19, 2020 admin समाचार 8679
December 27, 2020 admin समाचार 3330
कोमाछा पालन एउटा कृषि व्यव’साय हो । तराईका विभिन्न भूभागमा यो पेसा ब’ढ्दो क्रममा छ । माछा पोषण’को रूपमा प्रयोग गरिने प्रोटिनको एक प्रमुख स्रोत हो । माछा सुपाच्य हुनुका साथै यसमा १५–२० प्रतिशत प्रोटिन
LEX 18 agenda conversation: Job club (544617)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515067)
Hello world! (436026)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398473)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131878)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109072)